Jo Philpot - MedAid Academy
Nanatevin-daharana anay tamin’ny volana jolay 2018 i Jo ary Mpiasan’ny Operations ho anay. Jo dia mitondra traikefa be dia be avy amin’ny andraikitra ara-pitantanana ao anatin’ny NHS, ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ary ny fitantanam-bola. Tian’i Jo ny fanaovana ski, zaridaina, mamaky ary tia manao dia lavitra.
Voalohany indrindra dia misaotra anao aho, ny ekipa Medical International tamin'ny ezaka sy ny fanoloran-tena ho amin'ny fampandrosoana injeniera biomedika efa voadinika tsara indrindra ho an'ireo hopitaly ambanivohitra amin'ireo firenena tsy mandroso sy mandroso.
Tena faly sy sambatra tokoa aho fa anisan'ity ekipa ity izao. Izaho, Andriamatoa Bravin Lakshmanan Rajaretnam, mpitsabo mpanampy ao amin'ny efitrano fiasana amin'ny asa aman-draharaha dia mahita ny Unit 1 momba ny spectrum matetika, ny Unit 11 momba ny fanafody fanatoranana ary ny efitrano fandidiana dia nanampy ahy tamin'ny fampivoarana ny fahalalako tamin'ireto lafiny ireto.
Ny Unit 13 dia tena hentitra sy maranitra amin'ny fifandraisana izay nanampy ahy haka sary an-tsaina ny toe-javatra misy amin'ny toe-javatra isan-karazany, ny fomba hahomby kokoa amin'ny fifandraisana, Trainer / Teacher sns
Amin'ny ankapobeny, ity fampianarana ity dia fananana tsy ho an'ny injeniera biomédical ihany fa ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana hafa indrindra ny mpitsabo mpanampy toa ahy.
Misaotra anao indray aho ny ekipa ary manolotra ny satroka amin'ny fanohananao. MISAOTRA ANAO…..
Andriamatoa Bravin Lakshmanan Rajaretnam
Misaotra ny ekipa Medical International tamin'ny ezaka nataonao sy ny fanohananao hampivelatra injenieran'ny biomédical izay namboarina tsara manerantany.
Faly be aho fa anisan'ity ekipa teknisiana biomedika ity.
Misaotra anao tamin'ny fandraisana andraikitra hampiofana teknisianina an-tserasera satria izany dia manampy olona marobe manao fanazaran-tena sy miasa miaraka amin'izay tsy handao ny firenentsika.
Faly be aho noho ny fahalalana nomenay anay nandritra ny fotoam-piofanana. Handeha hamidy aho fa nianatra nanatsara ny kalitaon'ny fikojakojana ny fitaovan'ny hopitaly.
Misaotra anao indray.
Yves MUNANA B.HOSPITAL GAHINI
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra ahafahantsika manao teti-bola lavitra dia ny fampiasana fitaovana tsy misy ilana azy intsony andrefana. Tena mahomby ity fanodinana ity. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny raha mieritreritra ianao fa manana fitaovana amin'ny karazana mety hanampy.
Midira ao amin'ny lisitry ny mailaka anay haharaka ny vaovao rehetra,
fampianarana, hetsika ary maro hafa.
Namboarina & novolavolain'ny NR Creative Marketing.
Azafady mba jereo ny horonantsary ary ny atiny hafa rehetra dia zon'ny mpamorona rehetra © Medical Aid International 2019 Medical Aid International dia orinasa voasoratra anarana any Angletera sy Wales eo ambany laharana 7288956.